Inuu joogteyo masafada 2 mitiir ee dadka kale ee ka baxsan guriga, iyo 1-mitiir goobaha shaqada
Dhaq gacmahaaga oo si joogta ah u qalji
Haddii aad leedahay astamaaha hargab ama ifilo jog guriga, wac dakhtarkaaga ama Khadka caafimaadka (Healthline) oo isbaar. Ha safrin, aadan iskuul ama shaqo
Raad raac halka aad tagto iyo cida aad aragto. Isticmaal app-ka Raad raacaha NZ COVID, buug yaraha raad raacaha COVID-19, ama qoraalada qoran.
Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan fayraska COVID-19 iyo astaamaha (external link)
Riix halkan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan Baadhitaanka (external link)
Riix halkan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan raad raacida Bluetooth (external link)
Xaga Digniinta Heerka 2, daboolada wejiga sharci ahaan waa in la xidhaa:
Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan maskareetada iyo daboolada wejiga
U qabsashada shaqada si badbaado ah
Dhismayaasha ganacsiga ee buuxiya shuruudaha caafimaadka dad waynaha ayaa loo furi karaa shaqaalaha iyo macaamiisha.
Shuruudaha caafimaadka dad waynaha waxaa ka mid ah:
soo bandhigida app-ka Raad raacaha NZ COVID QR lambarka boodhka iyo lahaanshaha nidaamyada raad raaca xidhiidhka oo kale; iyo
ilaalinta tallaabooyinka fayo dhowrka sida dhaqida gacmaha iyo caadi ahaa u nadiifinta oogooyinka si caadi ah, iyo
raacida hagitaanada kala fogaanshaha jidhka.
Adeegyada la siiyay macaamiisha ku jirta dhismaha – tusaale ahaan gurigooda, iyo adeegyada xidhiidhka dhow ee buuxiyaha tallaabooyinka caafimaadka dad waynahu ku hawl geli karo.
Haddii goobta shaqada aanay buuxin karin tallaabooyinkan ma shaqayn karto.
Dhammaan ganacsiyada waxaa loo soo dhawaynayaa in loo isticmaalo qaabab kale oo shaqayn ah haddii ay suuragal yahay iyo in lagala hadlo shaqaalaha si loo aqoonsado khataraha iyo qaababka si loo maareeyo iyaga.
Ganacsiyada sidoo kale waa inay buuxiyaan dhammaan waajibaadyada kale ee caafimaadka iyo badbaadada, oo ay ilaaliyaan badqabka shaqaalaha iyo fayoqab oo ay buuxiyaan heerarka ugu yar shaqada.
Waxbarashada heerka 2
Xaruumaha Waxbarashada Hore, iskuulada-xanaanada, iskuulada iyo xaruumaha goobaha waxbarashada ayaa waxay furan yihiin da’da walba.
Waa mad qab inay carruurta ku jiraan iskuulka.
Dhalinyarada iyo carruurta waa qasab inay guriga joogaan haddii:
leh astaamaha COVID-19
ay sugayan natiijada barista COVID-19.
Safarka iyo dhaqdhaaqa Digniinta Heerka 2
Haddii aad jiran tahay, joog guriga.
Haddii aad fiican tahay, aad safri kartaa. Laakiin hubi inaad sameeyso qaabka badqabka ah.
Jimicsiga iyo madadaalada Heerka 2 ee Digniinta
Heerka Digniinta 2, waxaad caadi ahaan sameeyn kartaa hawlaha ciyaaraha iyo madaaladda haddii aad u sameeyn karto si bad qab ah. Laakiin haddii aad xanuunsantahay, guriga jooog.
Marka aad ku jimacsanayso goob dadweyne, ilaali masafada 2 mitiir ee dadka aan garanaynin haddii ay surtagal tahay.
Waad sameeyn kartaa hawlaha sida:
socod, baskiil wadis, ugaarisga dhulka dowladdu xanaaneyso
dabaasha waaskadda dadweynaha, laakiin waxaa jiri doona xadidaad, la
aadista gym-ka, laakiin waxaa jiri doonaa xadidaad
doon raacista ciyaaraha biyaha ee doomaha motorada leh
Isku imaanshaha bulshada
Isku imaanshaha bulshadu kama badan karto 100 dadka meesha loo xadeeyay hal wakhti kasta ah.
Tan waxaa kama mid ah:
joogida martada gurigaaga.
naadiga bulshadda iyo hawlaha ciyaaraha
shaqooyinka gaarka ah sida maalinta dhalashada, xaflada ama stag do.
Shuruudaha aaska iyo geerida iyo talada
Shaqaalaha bixinaya adeegyada isku imaanshaha bulshadda kuma jiraan 100 xadka qofka.
Ka dhig oogooyinka nadiif, dhaq gacmahaaga oo ilaalinta fogaanta jidhka halka ay suuragal tahay. Haddii aanad ilaalin karin fogaanta jidhka ee dadka aanad garanayn, ka feker xidhashada daboolka wejiga.
Qofka abaabulaya isku imaashaha sharciga ah waa inuu diiwaangeliyaa dadka imanaya si loo hubiyo raad raaca xidhiidhka inuu dhici karo haddii loo baahdo. Tan looma baahna haddii qof kasta oo jooga isku imaanshaha ay is garanayaan, laakiin weli waa fikrad fiican.
Haddii aad leedahay dhisme kuu kiiraysan oo isku imaanshaha ah markaa sharciyada isku imaanshaha ayaa la adeegsanayaa.